About xasuusta y card online
Waa mid ka mid ah mada xogta ugu khatarta badan iyo halista ah in la qaban karo marka ay timaado card SD ama kaadhka xusuusta y internetka. Iyadoo qalab iyo farsamooyinka la xidhiidha aan la heli karin, laakiin weli kuwa la soo basaasay yaabaa yihiin kuwa ku jira caan ah ee u dhimin xogta iyo macluumaadka shakhsi ahaaneed ee user ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in y barnaamijyada kaarka SD in download oo lagu rakibay gal nidaamka waxaa had iyo jeer lagula talinayaa sida ay u hubiso in ay gaarka ah iyo daacadnimada xogta guud ahaan la ilaaliyo ee kharashka oo dhan. Sidaa darteed waa weyn lagu talinayaa in marnaba ha adeegsan barnaamijka internetka laga heli karo arrintan la xiriira sidii ay lahayd oo keliya ma heli user galay arrinta, laakiin sidoo kale ka dhigi doonaa hubiyo in adeegyada ugu fiican yihiin marna ma bixiyo arrintan la xiriira. The y kaadhka xusuusta sidaas daraaddeed online waa in laga fogaadaa iyo user wuxuu hubinayaa in aan u isticmaasho sameeyo.
Dhibaatooyinka la kulmeen iyadoo la isticmaalayo kaarka SD
Waxaa jira dhowr arrimood oo in user a laga yaabaa inuu wajaho marka ay timaado isticmaalka kaarka SD iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in ay soo socda waa qaar ka mid ah kiisaska arrintan la xiriira, taas oo sidoo kale la kulmi karaan macluumaadka aad u daran:
1. card formatted
Waa in la ogaadaa in haddii kaarka SD la formatted sabab kasta ka dibna aan ugu wanaagsan iyo qalabka ugu isticmaalay user ma awoodi doonaan in ay xogta fudayd iyo qanacsanaanta. Sidaas awgeed waa in hore iyo arrinta ugu horreeyey waa in laga soo food kara user card SD ah.
2. wareejinta xogta aan haboonayn
Waxaa sidoo kale loo arkaa in ay tahay arrimaha aadanaha la xidhiidha khasaaraha xogta iyo arrinta sababtay halka isticmaalaya kaarka SD ah. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in wareejinta xogta iyo ka card SD ah waa in mar kasta la sameeyo sida heerarka si user u arko dhalna ma lahayn iyo xogta waxaa weli ku jira booska kaarka.
Ma jiraan wax online y qalab card SD?
Waxaa jira sababo badan oo taas ma jiraan wax qalab card SD online la heli karo iyo inta badan sababaha la xidhiidha nooca xogta. Iyadoo jawaabta waa weyn MAYA soo socda waa sababaha la xidhiidha arrinta ma card SD y aalad online:
Tanaasulka 1. Data
Waa in la ogaadaa in xogta aan gudanin oo kaliya laakiin macluumaad shakhsiyeed oo sidoo kale karaa si fudud loo wadaago haddii y card SD aalad online waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay tahay hal ama laba barnaamij soo kabashada xogta online waa in aan marnaba la isticmaalin kharash kasta.
Sharafta 2. Data carqalad
Tanaasulka xogta waa arin laakiin haddii la dhacday gacmo qaldan ka dibna waa hubaal in sharafta xogta la hakin oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Anonymous waxay ku isticmaali kartaa faahfaahinta shakhsiga ah si ay u helaan nidaamka kaas oo ay isticmaalaan iyo waxa la samayn karaa meel fog laga fudayd.
Qasaaraha isticmaalaya qalab online in xogta gaarka ah
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in ay jiraan tobanaan kun oo khasaaraha isticmaalka y aalad online iyo qaar ka mid ah ayaa la sheegay in hoos ku qoran si aad u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan oo aan isticmaalin qalabka y online:
1. Shakhsi wadaaga macluumaadka
Waa mid ka mid ah khasaaraha ugu musiibo in la xiriira dib u soo kabashada xogta online. Goobta la sheegay in loo isticmaalay laga yaabaa in nuqul ka mid ah warbixinta oo uu soo baxey iyo markaas waxa ay la wadaagi karaan lacag si ay dadka kale iyo xitaa tuugada ah. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay marnaba isticmaalaan qalab kasta oo ka mid kharash kasta.
2. In isticmaalka khaldan
Macluumaadka in dib loo soo celiyo sidoo kale loo isticmaali karaa falimihiinna qaldan oo arrintan la xiriira user weli ka warqabin xaqiiqada ah. Sidoo kale waa mid ka mid ah khasaaraha isticmaalka qalab online in niyad isticmaalka technology kasta oo kale oo dhan.
Sida loo kaarka SD nabad iyo degdeg ah?
Wondershare Data Recovery waa jidka keliya in la hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi kara. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in user inay hubiyaan in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah marka la eego sida gaarka ah iyo barnaamijka mar walba waddaa in offline hab si cabsi ma aha ee tanaasulka xogta nooc kasta oo ka dhigi kara. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ugu fiican iyo barnaamijka ugu dadaala waxaa loo isticmaalaa by doorto Wondershare Data Recovery sidii oo waa inuusan marna kaydiya xogta user iyo element ee gaarka ah mar Samirkoodii Dartiis dhammaan kharashaadka aan Dicumintiyo wax sii. Geedi socodka la xiriira in ay tahay in la raaco si loo xogta ayaa la soo bandhigay sida ka yar si user helo arrintan la xiriira heshiiska ugu fiican:
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html barnaamijka waa in laga soo degsan oo lagu rakibay:
2. nooca file waa ka dibna in la soo xulay:
3. user ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in goob file badiyay xulay:
4. Ka dib soo celinta user inay hubiyaan in files yihiin ed garaacida badhanka ka dhigi kartaa:
Noocyada macluumaadka ay taageerayaan iyo xaaladaha barnaamijka
Waxaa jira qaabab 550+ taasoo ay taageereyso barnaamijka oo soo socda waa qaar ka mid ah:
DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, CWK, HTML / HTM, INDD, EPS, iwm
PST, DBX, EMLX, iwm
JPG, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, NEF, saxda, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, cayriin, iwm
AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, wmv, ASF, FLV, Jabbuuti, Mpg, dhexena / RMVB, iwm
AIF / AIFF, M4A, MP3, regelingen, WMA, bartamihii / MIDI, OGG, AAC, iwm
ZIP, rar, fadhiisan, iwm
Xaaladaha in Wondershare Data Recovery caawin kara
Tirtirka ah Shil xogta
Hawlaha caadiga ahayni
Talooyin Si looga hortago tuugada Data
Ka dib markii qaar ka mid ah talooyin ah in la raaco si loo hubiyo in xogta xatooyo iyo khasaaraha sababtay waxaa loogu hortegi karaa:
i. Xogta xasaasiga ah waa B hoos hayay ilaalinta sirta ah si ay u sameeyaan waa securer iyo ammaan.
ii. Warbixin-shaqsiyeedka waa in si fiican loo tirtiro oo user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in kaarka waxaa sidoo kale formatted gudahood qalabka sameeyo
iii. The barnaamijyadooda sirta xogta waa in la isticmaalaa si loo hubiyo in macluumaadka gaarka ah mar walba sii amaan iyo kalsooni dhan wakhtiyada
iv. Waa in la isticmaalaa State of barnaamijka fanka antivirus ah.
Sida loo dayactir Qaabka Error Memory Card
> Resource > Memory Card > Sida loo sameeyo dib u soo kabashada kaarka SD online